ကာတွန်း ကူမိုးကြိုး – အိုအိုင်စီ တဲ့ဟေ့ … | MoeMaKa Burmese News & Media
အောက်တိုဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၂
3 Responses to ကာတွန်း ကူမိုးကြိုး – အိုအိုင်စီ တဲ့ဟေ့ …
Myo chit maung on October 16, 2012 at 5:22 pm
Yes we are poor . Base on the poorness ,OIC will get advance to make our country to become muslim one. O Myanmar ,Be alert and against OIC for our generation .
H.Naing on October 16, 2012 at 10:49 pm
မြန်မာ နိုင်ငံ မှာအစွလာမ်ဘာသာဝင်၂%မဟုတ်ဘူး၊၁၀% ကျော်ပြီးဆိုတာမသိသေးဘူးထင်တယ်၊
Kareen on October 18, 2012 at 1:27 am
101% have also dont want muslin